Degista ardayda - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Degista ardayda
Haddii aad tahay arday waxaad codsan kartaa guryaha la kireysto ee loogu talagalay gaar ahaan ardayda. Guryaha la kireysto ee ardaydu sida caadiga ah waa kuwo ka raqiisan guryaha kale. Guryaha ardayda waxaa kireeya mu’asasooyinka guryaha ardayda, gudiyada ardayda sare ee jaamacadaha, naadiyada ardayda iyo mu’asasooyinka qaarkood. Machadyada waxbarashada qaarkood waxay leeyihiin guryo u gaar ah.
Waxaad codsan kartaa guri islamarka aad hesho boos waxbarasho. Magaalooyinka waa weyn guri ka helidoodu waxay qaadan kartaa dhowr todobaad ama bilood.
Haddii aad hesho guri arday, waxaad inta badan deganaan kartaa mudada waxbarashada oo dhan. Si kastoo ay ahaataba waxaa lagaa doonayaa inaad inta badan waxbarato, waxbarashadaaduna horay u socoto. Kireeyuhu wuxuu kaaga bixi karaa kirada haddii aadan sameynin waxbarashooyin kugu filan.
Haddii aad ku jirto xeyndaabka ammaanka bulshada Finland, waxaad Kelada kaalmo uga codsan kartaa kharashka kirada ku baxa. Faah-faahin dheeraad oo ku saabsan kaalmada kirada ka sii aqri bogga InfoFinlandi Kaalmada ijaarka.
Macluumaadka badbaadada shacabka ee ee ardaygaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 16.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir